खुसिको खबर: SEE पास गरेका युवालाई सरकारले ५ लाख दिने ! – AB Sansar
October 28, 2020 adminLeaveaComment on खुसिको खबर: SEE पास गरेका युवालाई सरकारले ५ लाख दिने !
अब युवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्वरोजगार कर्जा पाउने भएका छन् । ८ असोजमा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधिमा तेस्रो पटक संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
बैंकले ग्राहकलाई लगाउने व्याजदरमा राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिनेछ । गत बैशाखसम्ममा ६६ जनाले तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर शिक्षित युवा कर्जा पाएका छन् भने विदेशबाट फर्केका दुई सय २२ जनाले १५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्जा पाएका छन् । ***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
पैसा कम दिएको भन्दै पुर्व युवराज पारसले जब म्यानेजरलाइ मुक्का बर्साए !